အသပြာ ထောင် ၁ထုတ်နဲ့ သဂျီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အသပြာ ထောင် ၁ထုတ်နဲ့ သဂျီး
အသပြာ ထောင် ၁ထုတ်နဲ့ သဂျီး
Posted by ဆူး on Dec 11, 2010 in Drama, Essays.., My Dear Diary, Short Story | 27 comments
ဆူး စိတ်ကူး ရွာ ပုံပြင် အသပြာ ထောင် ၁ထုတ် နဲ့ သဂျီး
တနေ့မှာ ရွာထဲက သဂျီး ထမင်းစားဖိတ်ခံရတာနဲ့.. ထမင်းစားသွားတယ်ပေါ့ကွယ်.. ထမင်းစား ဘယ်သူဖိတ်သလဲ ဆိုရင် သဂျီးရဲ့ မိန်းမ ရွာထဲမှာတော့ first lady ပေါ့လေ.. သူမရဲ့ ညီမ မဝေ က ရွာထဲက ဆူး ရှာဖွေ တွေ့ရှိတဲ့ ငါးမွှေ နဲ့ ငါးခေါင်းဟင်းချိုကို စမ်းချက်ပြီး ကြက်ဥအလွယ်ကြော် တပွဲလည်း ပါတယ်။ စားပြီးရင် သုံးဆောင်ဖို့ စတော်ဘယ်ရီ ကြက်ဥ ပူတင်းလေးလည်း လုပ်ထားတယ်။ သဂျီး ကတော် ပါ ခေါ်ပြီး လာခဲ့ပါလို့ ဖိတ်တော့ သဂျီးကတော်က မီးလေးအိမ်မှာ ညဘက် တယောက်ထဲ အဖော်မရှိတာနဲ့ ညအိပ်သွားစောင့်နေတာနဲ့ တပည့်ကျော် အောင်ပုနဲ့ အတူတူ ထမင်းစား သွားတီးမယ်လို့ ကြံပြီး ကားတစီး နဲ့ မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကားကိုတော့ အောင်ပုက မောင်းရင်းနဲ့ သွားကြရင်း လမ်းတနေရာမှာ ငိုက်မိတာနဲ့ အနောက်ကားက ၀င်စောင့်သွားတယ်။
အရှိန် ပြင်းထန်စွာ တိုက်မိတဲ့ ပြင်းအား တခုကြောင့် အရှေ့က ကားတစီးကို ၀င်စောင့်မိသွားပြန်တယ်။
ကားတိုက်မိလို့ ပြသနာ ဆင်းရှာမယ်ကြံတော့ နောက်က ၀င်စောင့်တဲ့ကား မောင်းပြေးသွားတယ်။
မောင်းပြေးတဲ့ကား လက်ရ မဖမ်းနိုင်ပေမဲ့ ကင်မရာနဲ့ အမိအရ ဖမ်းမယ်လို့ ကြံတော့.. ကင်မရာကို ပါဝါ ဖွင့်တုန်း ကားက မျက်စိရှေ့က ပျောက်ကွယ်သွားပါလေရော.. ကား နံပါတ်ပြား သေချာ မရှင်းမရှင်းနဲ့ ကြည့်လိုက်မိတာ ကြယ်လေး ကို မြင်မိတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အရှေ့ကားနဲ့ သွားညှိတော့ ကားပေါ်ကိုပေါက် မန်းက ဆင်းလာပြီး တိုင်ချက်ဖွင့်မယ် မလျော်လို့ကတော့ ဘာညာကွိကွ ဖြစ်သွားမယ် ဘာမှတ်နေလဲ..
ဒီလိုနဲ့ ဆရာတပည့် နှစ်ယောက် မျက်နှာငယ်နဲ့ တောင်းပန်ကြတဲ့ အခါမှာ.. အသပြာ ထောင် ၁ ထုတ် နဲ့ တည့်သွားလေရဲ့.. ရဲတိုင်ပြီး တိုင်ချက်ဖွင့်တော့လည်း ကားနံပါတ် ကို သေချာ မပြနိုင် မြင်လိုက်တာ ကြယ်လေး သက်သေမရှိတော့ လွတ်သွားတာပေါ့။ ဒီကိစ္စနဲ့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ထမင်းစား မသွားတော့ဘဲ.. အိမ်လှည့်ပြန်ကြပြီး
တပည့်နဲ့ တိုင်ပင်တယ် သဂျီးလို့သာပြောတာ လက်ထဲမှာ ထောင်ထုတ်ကလည်း မရှိ စားစရာ မရှိပေမဲ့ လျောစရာကတော့ ရှိတယ်လို့ လူကြီးတွေ ပြောတဲ့ စကားမှန်နေပြီကွာ.. တပည့်ကျော် အောင်ပု စဉ်းစားပါအုန်း တရားတဘောင်နဲ့ ဆိုရင် သက်သေရှိမှ သက်သေမရှိတော့ ခံနေရပြီ တခြားနည်းနဲ့ အကြံထုတ်ကြလေရဲ့.. ပြောသာ ပြောတာ.. တိုင်ပင်နေကြတာကို
တုံး၊ … ကွီး၊ … လန် …
ဆိုတဲ့ သားနဲ့ သမီး နှစ်ယောက် ကြားသွားကြတယ်။ သူတို့ကလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး ခမည်းတော်ကြီး စိတ်ညစ်နေရှာမှာဘဲ။
ဒီလက သုံးတာ များလို့ အကြွေးတွေ ၀ိုင်းနေလို့.. စိုက်ပေးဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်.. စဉ်းစားရင်းနဲ့ ကားပိုင်ရှင် ကိုသွားတောင်းပန်ပြီး အချိန်နဲနဲ ပိုပေးအောင် ညှိကြမယ်လို့ အကြံထုတ်ပြီး သူတို့ ကြားတာ ပေါက်ဆိုတော့.. ပေါက်ဖော် ဆီကိုသွားပြီး ၃ယောက်သား အငိုမျက်နှာနဲ့ ၀ိုင်းတောင်းပန်ကြတယ် ပေါက်ဖော်က ကာယကံရှင်မဟုတ်တော့ သူမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ ပြန်လှည့်လာကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သားသမီးတွေ ကြိုးစားနေချိန်မှာ သဂျီးက ဇနီးကိုလည်း မပြောရဲ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်မှိတ်နေရတာ တကြောင်း ကားတိုက်မိတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် အရူးမီးဝိုင်း.. အဲ.. သဂျီးမီးဝိုင်း သလိုဖြစ်ပြီး စိတ်တွေ ဂယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီး ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတော့ တပည့်ကျော် အောင်ပု ကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူး ကြယ်လေးကို ရှာတွေ့အောင် ရွာမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘိုးတော်ဖက်နဲ့ သွားတိုင်ပင်ဖို့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဘိုးတော်ဖက် အိမ်ပေါက်ဝ ရောက်တော့ ဘိုးတော်ဖက်ရဲ့ တပည့်ကျော် ကြောင်ကြီး က အပေါက်ဝကနေရပ်ပြီး လှမ်းတားတယ်။ ဒီအချိန် ဘိုးတော်ဖက်က အထက်ဘ၀က် အောက်ဘ၀က်မှာ ရှိကြတဲ့ ယမမင်းနဲ့ သိကြားမင်း တို့နဲ့ ညီလာခံဝင်နေလို့ အခု မအားသေးဘူးလို့ ဘုတော ပြောပြီး ဟောက်လွတ်လိုက်တယ်။ အမှန်တော့ ကြောင်ကြီးကလည်း ကြောင် ဆိုပြီး ခေသူ မဟုတ် ညက ဘိုးတော်ဖက် မင်းတုန်းမင်း ဇတ်လမ်းကနေလို့ အိပ်ဆောင်ကို တော်တော် နဲ့ ပြန်မလာဘဲ မနက်လင်းမှ ပြန်လာတော့ သဘောပေါက်တယ်လေ.. ဒါကြောင့် အောင်ပု လာတဲ့ အချိန် သတင်းမပျံ့ရအောင် ထက်မြတ်တဲ့ ကြောင်ကြီး ဘုတော မလိမ့်တပတ်လုပ် လိုက်ရတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာ စိတ်နှောက်နေတာ မမြင်ရက်တာနဲ့.. နောက်တခါ အကြံထုတ်တော့ မှော်ဆရာ တယောက်ကို ပြေးမြင်မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မှော်ဆရာဆီ တခါပြေးရပြန်ကော.. မှော်ဆရာကတော့ မှော်အတတ်အစွမ်းနဲ့ ကြယ်လေးရှာတွေ့အောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောပြီး.. မျက်လုံးကို မှိတ်.. ဖန်လုံးကို လက်တဖက်နဲ့ ပွတ် ဒုတ်ကလေးကို မွေ့ပြီး ဥုံ ဘာနီဘာနီဘု ဘုနီ ဘာနီ ဘာဘာ.. ဆိုပြီး ရွတ်လိုက်ပါသတဲ့.. နောက်ပြီး မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ပြီး ကြယ်လေးကို တွေ့ရမယ် အခုလာမဲ့ ခရစ်စမတ်နေ့.. သစ်ပင်ထိပ်မှာ တက်နေလိမ့်မယ်။ ရွာလယ်က ရွာတော်ခမ်းမ အရှေ့မှာ သစ်ပင် တပင်စိုက် ဆိုပြီး မျိုးစေ့ တစေ့ ပေးလိုက်တယ်။ ထိုသစ်ပင် မှော်အစွမ်းနဲ့ နေချင်းညချင်း ကြီး ပြီး သစ်ပင်ထိပ်မှာ ကြယ်လေး ညိပြီး တင်နေလိမ့်မယ်။ သူကြီး လိုတဲ့ အသပြာ ထောင်၁ထုတ် အနီရောင်ဝတ်နဲ့ မုတ်ဆိတ်ဖြူဖြူနဲ့ ၀၀တုတ်တုတ် အဖိုးကြီး လာပေးလိမ့်မယ်။ ရရချင်းသာ ပြေးပြီး သွားပေးပေတော့လို့.. ပြောလိုက်တာနဲ့.. ၀မ်းသာ အားရ ပြန်သွားတယ်။ ရွာလယ်ခေါင် ရွာလယ်ခန်းမ မှာ မှော်ဆရာ ပေးတဲ့ မှော်အတတ် မျိုးစေ့ ကို စိုက်ကြတယ်။ ခိုးနားထောင်ရင် သိလိုက်ကြတဲ့ သားသမီး တွေက စဉ်းစားကြတယ်။ အင်း.. ဒီအစေ့က စိုက်လို့ နေ့ချင်းညချင်း အပင်ကြီး ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ခမည်းတော် စိတ်ဝေဒနာ သက်သာအောင် ဆိုပြီး အကြံထုတ်ကြပြန်တယ်။
ထို့နောက် အသက်အားဖြင့် ကြီးမားလှတဲ့.. အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်တဲ့ အဘနီနဲ့ သွားတိုင်ပင်ပြီး အကြံအစီ အတိုင်း ရွာသား အာဂ နဲ့ နေဘုန်းလျှံကို အကူအညီ တောင်းပြီး ရွာပြင်က သစ်ပင်ကြီး တပင်ကို ခုတ်ပြီး ၂၄ရက်နေ့ ညမှာ သွားချထားပြီး သစ်ပင်ထိပ်မှာ ကြယ်လေး ကို ဖမ်းချုပ်ပြီး ဆွဲချည်ထားခဲ့တယ်။
နောက်ထပ် အနီရောင် အ၀တ်နဲ့ မုတ်ဆိတ်ဖြူဖြူ ၀၀ တုတ်တုတ် အဖိုးကြီး အဖြစ် သမီးတော် နှစ်ယောက် သားတော်ကို ထမ်းပြီး အနီရောင်ကိုဝတ် မျက်နှာ မမှတ်မိအောင် မုတ်ဆိတ်ဖြူကြီး တပ်ပြီး ရွာထိပ်က ကောက်လာတဲ့ ဂဲထုတ်ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပေးပြီး အမြန် ထွက်ပြေးကြတယ်။ မနက်လင်းတော့ သဂျီး အပင်ကြီးကိုလည်း မြင် အထုတ်ကြီး လက်ဝယ်ရတဲ့ သဂျီး သြလွန်းလို့.. ၀မ်းသာ တုန်လှုပ်ပြီး မျက်ရည်များ လည်တဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ပုံကလေးတွေနဲ့ အလွန်ကောင်းတဲ့ ပုံပြင်ပဲနော် …
သူကြီးခဗျာ လုပ်ကြံခံရမှန်းလဲ သိသွားရော ပိုပြီး အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်သွားလေသတဲ့ … ဒါပေမယ့် သူကြီးဆိုတော့ အာဏာရှိတယ်လေ … ရွာသူရွာသားတွေကို အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ် … ယနေ့မှစပြီးတစ်လတိတိ ထောက်ပံ့ကြေးငွေအားလုံး ဖြတ်တောက်လိုက်သည် … ဘွားတော်ဆူး တီထွင်ထားသော ဓါတ်ဆန်ပြုတ်ဖြင့်သာ အသက်ဆက်စေ …. ဒူ … ဝေ ….. ဝေ ……..
ဘာဖြစ် ဖြစ် လေ သူကြီး ကြေနပ် အောင် ခရစ်စမတ် ပြီးတဲ့ထိတော့သစ်ပင်ပေါ်နေလိုက်ပါမယ်
နံပါတ်ပြား ကြယ်ပါတာ ကို ပြောတာပါ.. ဒါပေမဲ့.. လုံးချလိုက်တာ.. ကြယ်လေး ဆိုပြီး
ကောင်းတယ် တော်တော်ရီရတယ် ပုံလေးတွေလဲချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာ
နောက်ဆက်တွဲရှိသေးရင်လုပ်ပါအုံး ကျနော်တို့လဲဟို့လူ့သားဖြစ်လိုက် ဒီလူ့ သားဖြစ်လိုက်နဲ့ ဘယ်တူအရင်းလဲတောင်တိတော့ဝူး
မပူနဲ့… သဂျီးသား စစ်စစ်.. ကြောင်ကြီး နတ်ပုံပြင်မှာ နတ်မင်းကြီး သဂျီး ရဲ့ သားဘဲလေ..
အာဖျံကွီးနားကိုလာခဲ့ တိုးတိုးလေး ပြောစရာရှိတရ် …
အမှန်တော့ ခမည်းတော်ကြီး သဂျီးကားကို နောက်က၀င်ကြုံးလိုက်တာ ကွီးဗျ …………
ဘိုးတော်ဖက်ကိုသွားမေးရင် ချက်ချင်း ပြသနာကောင်ကွီးအကြောင်း သိမှစိုးလို. ……………..
ဘော်ဒါရင်း ပြောမနာဆိုမနာ ကလေးတွေနဲ.ပဲရွေးပေါင်းတဲ့ ကိုကြောင်ကြီး @ ကိုကြီးကြောင်ကို သွားအကူအညီတောင်းထားတာ …………..
မနေနိင်ရင်တော့ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းက လော် ငှားပီး အော်ချင်ရင်အော်
ကွီးတော့ အသပြာ ထောင်ထုတ် ရအောင် ရှာသာ ယူခဲ့ပေတော့… အခြေအနေမကောင်းဘူး။ သဂျီး မီးဝိုင်းနေတယ်
ဟုတ်ကဲ့ … မဆူး ပြောလိုက်ပါ့မရ်။ ဟေ့ကောင် ကွီး …. မဆူးပြောတာကြားလား
အဲ … ကြားရင် မင်း အသပြာ ထောင်ထုတ် ရအောင် ရှာသာ ယူခဲ့ပေတော့ …
ဒါပဲ …. ဖုန်းချလိုက်ပီ … ဂွတ် (ဖုန်းချသံ)
တကယ်က … ကားက ဘယ်နှထောင်လဲမသိ ..လျှော်ရမှာ…။ ဘယ်ကားကိုလည်းဆိုတော့ ..ကိုယ့်ကားကိုယ်ပြန်လျှော်ရတာပေါ့..။
ရှေ့ကားကို ..လျှော်ရလှ ၃-၄ရာပဲ..။ သူက ..လယ်ပင်းနာတယ်ဆိုပြီး ဆေးခန်းမပြေးရင်ပေါ့လေ..။
ဆေးခန်းပြေးရင်တော့ … စုစုပေါင်း..ပေးရမှာက… ၃-၄ထောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်..။
ကိုယ့်ကားကိုယ်ပြင်စရိတ်က .. ၃-၄ထောင်ရှိနိုင်ပါတယ်..။
ဒါကို … အာမခံပေါ်လစီမှာ ..၁ထောင်အထိစိုက်မယ်လုပ်ထားတော့ ..၁ထောင်ကိုယ်ကပေးရတာဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒီ၁ထောင်က ..ဟိုဖက်ကကိုယ့်ဝင်တိုက်တဲ့သူသိရင် ..ပြန်ရတဲ့ ငွေပါ..။
အခု..ကားအက်စ်စိဒန့်မှာ.. လည်ပတ်ငွေက ..သောင်းဂဏန်း အသာလေးကျော်မဲ့ပုံပါခင်ဗျ…။
( ယူအက်စ်၊ကယ်လီဖိုးနီးယားကားအာမခံစံနစ်ကို … ရှင်းပြချင်တာ..ရှင်းမှရှုပ်ကုန်ကြသလားတော့မသိ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ဒီလအကြွေးတွေတင်ကုန်မှာမို့ … နှစ်ကူးလက်ဆောင်.. ရွာသားတွေကို ဖြတ်တယ်..)
ဒယ်ဒယ်ရယ် ~~ ဒီလောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေတာပဲ အဆင်ပြေတွားမှာပါဂျာ
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး အကြီးအကဲကြီးရေ ..
(ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ဒီလအကြွေးတွေတင်ကုန်မှာမို့ … နှစ်ကူးလက်ဆောင်.. ရွာသားတွေကို ဖြတ်တယ်..) ..
သတင်းကြားရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါ၏။ အကုန်အကျ များနေလို့ ဖြတ်မယ်ဆိုလည်း ဖြတ်ပေါ့.. နှမ်းတထောက်နဲ့ ဆီမဖြစ်ပေမဲ့.. အသပြာ ၄၀ ကျော် ၅၀ လောက်တော့ ရှိပါတယ်။ အဟမ်း.. ;) သဂျီး စိတ်ညစ်နေလို့ မှန်းပြီးသဂျီးပျော်အောင် နောက်လိုက်တာ အနဲဆုံး တော့ ပြုံးသွားတယ် မဟုတ်လား။
ဟိုနေ့က ပြောတော့ အသပြာ ၁ထောင် ဆိုလို့ ထောင်ထုတ်လို့ ရေးလိုက်တာ.. ဒီလို ကြိုသိရင် သောင်းထုတ်လို့ ရေးပါတယ်။
ဆင်ဆရာ ကြက်ဖြူများရှင် အကြီးအကဲ ပီသပါပေတယ် …
ရွာသူရွာသားတွေလဲ ဘုမသိ ဘမသိ ဘာဘာ ဘာမှမသိ ပဲ အဖြတ်ခံခဲ့ရတာတွေက ရိုးနေတော့ ပိုပြီး မထူးတော့ပါဘူး …
တော် တိတိ တော်
အန်ကယ်ဂျီးကတော့ ပုံပြင်မှာ သူမပါလို့ စိတ်ခုနေပါတယ်။
သူဂျီးကတော် ဘယ်သူလဲ သိချင်လိုက်တောအေရယ်…………………..
အန်ကယ်ကြီး မပါလို့ စိတ်ခုရင် ပြင်လိုက်ယုံဘဲ.. အဘနီနဲ့ သွားတိုင်ပင်တဲ့ နေရာမှာ အန်ကယ်ကြီး နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို နှစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်တယ်လို့ ပြင်လိုက်ရင် ပြီးပါပြီ စိတ်မပူ နဲ့ နေရာပေးလို့ရသေးတယ်
အမလေး ဆူးမရဲ့ ညီးတို့လူငယ်တွေကတဲ့
ကယ်ကယ်ကြီး အခုမှ နောက် ဆုတ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့.. ရတော့ဘူး
ဘိုးတော်ဖက်က သူကိုယ်တိုင်တောင် ပုံစံ၁၉အလိမ်ခံရလို့ ဘယ်တိုင်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုကြောင်ကြီးလည်း ညတွင်းချင်း ကျင့်ကြံလိုက်တာ ရွေဖြစ်ငွေဖြစ် သိဒ္ဓိပေါက်သွားတယ်။ ရရချင်း တန်ခိုးနဲ့ ရွေဒင်္ဂါးပြား တထောင်တိတိကို အဝတ်နဲ့ထုပ်ပြီး သဂျီးသွားပေးလိုက်တယ်။ ရွှေဒင်္ဂါးတပြား ငွေအသပြာ တထောင်တိတိ တန်တာမို့ သဂျီးလည်း အပျော်လွန်ပြီး အိမ်ကမဟေသီကို မေ့သွားလိုက်တာ လနဲ့ချီကြာသတဲ့။ ရွှေကုန်တော့မှ သတိရပြန်လည်လာပြီး မောင်မှားပါတယ်လို့ အိုက်တင်အပြည့်နဲ့ အိမ်ပြန်သတဲ့။ အခုတော့ သူ့မဟေသီက ကားမောင်းခွင့် ပိတ်လိုက်လို့ စက်ဘီးစီးနေရသတဲ့။ အပြောကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါတဲ့။
ဦးကြောင်ကြီး ညတွင်းချင်း ပေါက်သွားပြီ ဆိုတော့ လျှို့ဝှက်ကျမ်းတွေ ဘာတွေများ ရထားလို့လား.. ရွာသားတွေ အတွက် ကြီးပွားရေး လမ်းညွန်ပေ့ါ.. ဟဲဟဲ
သဂျီးကတော့ ကျန်းမာရေး တော်တော် ဂရုစိုက်ဖို့ လိုနေပြီ ဆိုတာ သေချာနေပြီ။ စက်ဘီး များများ နင်းနေကျမဟုတ်ဘဲ နင်းမိရင်.. အမလေး.. သေပြီ ဆရာ.. အရင် လေ့ကျင့်ပြီးမှ.. စီးပေါ့..
သဂျီးတို့အိမ်က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးတော့ ရွာသားတွေပဲ ခံရတာပေါ့နော်… သဂျီးကတော် မီးအိမ်မှာ လာအိပ်တာက အဖော်လုပ်ဖို့ဟုတ်ဘူး…. ကိုးရီးယားကားကြည့်ခြင်လို့တဲ့…. အိမ်မှာက လူများတော့ တီဗွီလုနေရလို့တဲ့…….:P
ဖတ်လို့တော့ကောင်းသား … ပုံလေးတွေကလည်း ချစ်စရာကောင်းတယ် ။
ပုံတွေ ချစ်ရင် ယူထားလိုက်.. သမော်ဒီး တုံး ရေ…
မီးလေး အိမ်မှာ တီဗွီ လုလို့ လာကြည့်တာဆိုတော့.. သဂျီး အနိုင်ကျင့်တာ များသွားလို့ ထွက်ပေါက် ရှာတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်
သစ်ခုတ်သမား ဖြစ်ရပြန်ပါရော အရပ်ကတို့ရေ…. ။ သစ်ပင်တင်မကဘူး.အသပြာရမည်ဆိုပါက .အကုန်ခုတ်ပါသည်။ မှတ်ချက်။။ ကြွက်တော့ မခုတ်ပါ ။ ဆရာကြောင် လုပ်ငန်းထိခိုက်သွားမည်စိုး၍ဖြစ်သည်။
၀မ်းပမ်းတသာနဲ့ ပုဆိန်ကိုင်ပြီး သစ်ပင်ထမ်း လျှောက်နေပြီးတော့.. ဟီးဟီး..
သစ်တပင်ခုတ် ထောင် ၃နှစ် ရွာသဂျီးအတွက် ညက်စိ ခဏ ပိတ်ပေးထားတာ.. နောက်နေ့ သစ်ပင်တွေ သိပ်မခုတ်နဲ့နော်